Xildhibaan Jubaland ka tirsan oo wadani u aqoonsaday qoraa ka faallooda arima gobalka | BuhodlePost.com
Xildhibaan Jubaland ka tirsan oo wadani u aqoonsaday qoraa ka faallooda arima gobalka
Kismaayo, Soomaaliya(Buuhoodle Post)— Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Jubaland ayaa galabnimadii Khamiista ku tilmaamay nin wadani ah qoraa ka faallooda arimaga gobalka oo ku sugan magaalada Kismaayo.
Qoraal laga dheehan karo darreen kalgacal oo uu soo dhigay bartiisa Facebook uu ku leeyahay Xildhibaan Maxamed Janagale waxa uu ku sifeeyay Cabdi Qawle qoraa wadani ah oo soo bandhiga horumarka maamul Gobaleedka Jubaland.
“Waxa aan rabaa in aan mudnaantiisa siiyo qoraaga ku caanbaxay wadaniyada iyo in uu soo bandhigo hormarka ummadiisa, qoraalkiisana si buuxda ugu hagarbaxo dawlad gobaleedka Jubaland.”
Xildhibaanka oo noqonaya masuulkii ugu horreeyay ee si cad uga hadla dadaalka qoraa Cabdi Qawle ayaa sheegay in qalinkiisa kula dagaalamo kuwa xummaanta wada, kuwa wanaaga ka shaqeeyana soo bandhigo waxqabadkooda, kuwaas oo uu sheegay in ay yihiin masuuliyiin ka tirsan dowlad Gobaleedka Jubaland.
Waxa uu hadalkiisa ku daray xildhibaan Janagale:
“Hadaba waa kuma shaqsigaas aan daaha ka qaadee ciddaan aqooney hadaba baro waa (Abdi Qowle) Maxuu mudanyahay? Wuxuu mudanyahay in looga daydo wanaaga. Hadaanahay masuuliyiinta Jubaland waa in aan ku abaalmarinaa dadaalkiisa wadaniyadda ku dheehan oo uu marwalba nala garabtaaganyahay.(Mudane Geljire).”
Dhanka kale, ma aha masuuliyiinta kaliya waxa uu jaceylkooda soo jiitay qoraagu. Xasan Ina-Cadow ayaa ka mid ah dadka darreenkooda la xidhiidha qoraaga ku soo bandhigay baraha bulshada.
“Waxa Aan Rabaa in aan yara iftiimiyo sxbkay Mudane Geljire. Markasta Waxa aan arkaa isaga oo bulshada u soo bandhiga warar sugan, war dhexdhexaad ah iyo masuuliyiinta Soomaaliyeed qaarka bushadooda sida wanagsan ugu shaqeeya in uu soo bandhigo,” ayuu qoraalkiisa ku yidhi Xasan Ina-Cadow oo ah aqoon yahan kale oo isaga laftiisu dadka waxqora ka mid ah.
“Waa wadani da yar, jecel dalkiisa iyo dadkiisa in ay wax noqdaan.”
“Waxa aan rabaa Asxaabtayda inta garanaysa Mudane Geljire in la waydiiyo, muxuu mudanyahay?” Anigu waxa aan dhihi lahaa wuxuu mudan yahay in la dhiirigaliyo, billad sharafna la siiyo,” ayuu hadalkiisa ku daray.